Wararka - Qaabka loo cabbo matcha iyo saameynta shaaha matcha
Habka loo cabbo matcha iyo saamaynta shaaha matcha
Dad badani waxay doorbidaan matcha, waxayna sidoo kale jecel yihiin inay isku daraan budada matcha marka ay keega samaynayaan guriga, dadka qaarkoodna waxay si toos ah u isticmaalaan budada matcha si ay u cabbaan. Marka, waa maxay habka saxda ah ee loo cuno matcha?
Japanese Matcha: Marka hore dhaq weelka ama dhalada, ka dibna ku shub qaaddo ah matcha, ku shub qiyaastii 150ml oo biyo diirran ah (60 darajo ayaa ku filan), ku garaac matcha burush matcha, waxaad dhadhamin kartaa dhadhanka asalka ah ee xafladda Matcha Japan.
Waa maxay saamaynta matcha
(1) Cabbitaanka matcha si loo hagaajiyo aragga
Matcha wuxuu hodan ku yahay fitamiin A-ga, iyo fitamiin A waa dareen-wade aragga. Dareen -celinta macnaheedu waa "hagaajinta indhaha".
(2) Cab matcha si looga hortago suuska ilkaha
Fluorine waa mid ka mid ah waxyaabaha raad -raaca ah ee uu u baahan yahay jirka bini'aadamka. Fluoride la’aantu waxay saamayn doontaa caafimaadka dufanka lafaha iyo ilkaha, matcha waa cabitaan dabiici ah oo leh fluoride badan.
(3) Cab matcha si aad u qaboojiso maskaxdaada
Matcha waxaa ku jira qaddar dhexdhexaad ah oo kafeyn ah, sidaa darteed waxay leedahay saamaynta kicinta nidaamka dhexe ee neerfayaasha. Iyada oo udugga iyo udugga saliidda kacsan ee matcha -ga ah, ayaa ah nasasho iyo nasasho.
(4) Cab matcha si aad u kaabto fitamiin C
Shaqada fiitamiin C wax badan ayaa la darsay sanadihii la soo dhaafay, waxaana la isku raacay in kaabista fitamiin C ku filan ay aad waxtar u leedahay ka hortagga cudurrada iyo xoojinta jirka. Matcha waxaa ku jira fiitamiin C. hodan ah Heerkulka shaaha matcha waa inuusan aad u sarreyn, si fitamiin C uusan u baabbi'in. Cabbitaanka matcha ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu kabo fitamiin C.
(5) Cabbitaan matcha for diuresis iyo ka hortagga dhagxaanta
Caffeine iyo matcholine waa mid ka mid ah maaddooyinka ku jira matcha, waxay xakameyn karaan dib -u -soo -celinta tuubbooyinka kelyaha. Sidaa darteed, waa diuretic wanaagsan, oo aan karayn kaadida oo kaliya, xoojinaysa shaqada kelyaha, si sunta kelyaha iyo waxyaabaha qashinka ah loo soo saaro sida ugu dhakhsaha badan, laakiin sidoo kale looga hortagi karo cudurka kelyaha iyo dhagxaanta.
(6) Cabitaanka matcha si loo hagaajiyo shaqada caloosha iyo mindhicirka
Matcha waxaa ku jira alkaloids, taas oo ah cabitaan alkaline ah oo dabiici ah oo dhexdhexaadin kara cuntooyinka aashitada leh oo ilaalin kara pH -ga caadiga ah (waxoogaa alkaline ah) dheecaannada jirka. Intaa waxaa dheer, tannins -ka ku jira matcha waxay hor istaagi karaan bakteeriyada, kafeynku wuxuu kor u qaadi karaa dheecaanka casiirka caloosha, saliidaha udgoonku waxay kaloo milmi karaan dufanka waxayna caawiyaan dheefshiidka, sidaa darteed cabitaanka matcha wuxuu leeyahay saamaynta hagaajinta shaqada mindhicirka.
(7) Cabitaanka matcha si loo yareeyo dhaawaca shucaaca
Catechin -ka ku jira matcha wuxuu leeyahay saamaynta dhexdhexaadinta curiyaha shucaaca strontium iyo yareynta dhaawaca shucaaca atomiga. Waxay la dagaallami kartaa wasakheynta shucaaca ee magaalooyinka maanta, sidaa darteed waxaa loo yaqaan “cabitaanka da'da atomigga”.
(8) Cab matcha si looga hortago dhiig -karka
Matcha wuxuu hodan ku yahay catechins, gaar ahaan matcha, oo leh heer aad u sarreeya oo ah waxqabadka fitamiin P, kaas oo kor u qaadi kara awoodda jirka ee soo uruurinta fiitamiinnada, yarayn kara dufanka ku jira dhiigga iyo beerka, wuxuuna ilaaliyaa iska caabbinta caadiga ah ee xididdada dhiigga Sidaa darteed, joogto ah cabitaanka shaaha matcha wuxuu faa'iido u leeyahay ka -hortagga iyo daaweynta dhiig -karka, arteriosclerosis iyo cudurada wadnaha.
(9) Cabitaanka matcha si loo yareeyo kolestaroolka iyo ka hortagga cayilka
Fiitamiin C -ga ku jira matcha wuxuu faa'iido u leeyahay hoos u dhigidda kolestaroolka dhiigga, kor u qaadista adkaanta iyo dabacsanaanta xididdada dhiigga, iyo baaritaanno laga sameeyay goobo caafimaad oo Faransiis iyo Jabaaniis ah ayaa xaqiijiyay in cabbidda matcha ay dhab ahaantii hoos u dhigi karto kolestaroolka oo ay miisaanka dhimi karto.